‘शिविरमा मनाएको मार्च ८’ « Postpati – News For All
‘शिविरमा मनाएको मार्च ८’
जानुका धमला पढ्न लाग्ने समय : ९ मिनेट
मातृसत्तात्मक व्यवस्था र पितृसत्तात्मक व्धयवस्थाको चर्चा विद्यालयका पुस्तकमा पढिएको हो । मुख्यगरी इतिहासमा समाज व्यवस्था पढ्दा कहीं कतै ती व्यवस्थाबारे सुनिए पनि त्यसले हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा फरक पारेन । राजनीतिक रुपमा त त्यो विकट समय नै थियो, त्यो विकटताको हामी साक्षी हौं ।
महिला हक, महिला अधिकार, समान अधिकार, लैंगिक अधिकार, लैंगिक समानता, महिला शसक्तीकरण, नारी मुक्ति, योग्यता र प्रतिभाका आधारमा महिलालाई स्थान र अवसर आदिइत्यादि आदर्श, सिद्धान्त र पदावलीहरु परिवर्तनकारी यात्राको बाटोमा होमिने बेलासम्म गम्भीर विषय हो भन्ने नै लागेन ।
महिला दिवस किन मनाइन्छन् ? महिला दिवसको औचित्य के हो ? महिला अधिकारको सवाल कहाँबाट कहाँसम्म जोडिएको छ ? महिला मुक्ति सम्भव छ ? हामी सबैखाले दासताबाट मुक्त त हुन्छौं ? यस्ता सवालहरु जनयुद्धको मोर्चामा सामेल नहुँदासम्म मेरा लागि गौण विषय नै थिए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमको रुपमा मैले कहिले मनाएँ भनेर सम्झँदा त्यो ९१ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसबाट औपचारिक हुने रहेछ ।
पछिल्लो दुई दशक महिला मुक्तिको यात्रामा, महिला अधिकारको यात्रामा, समानताको लडाईमा सुनिने गरी परिवर्तन भएका छन्, देखिने गरी परिवर्तन भएका छन् । तर त्यो परिवर्तनको मौलिकता क्रान्तिको यात्रामा छँदा बुनेका सपनाभन्दा धेरै मानेमा कुरुप कुरुप लाग्छ, विरुप विरुप लाग्छ । मुक्ति, अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता मुठ्ठीभरका समूहहरुको भागबण्डामा सीमित हुँदा हामीले देखेका सपना त्यही भुईमै लडिरहेको…छटपटाइरहेको जस्तो लाग्ने रहेछ ।
मैले पनि धेरैपटक मेरा सहयोद्धाहरुलाई हौस्याउँदै भनेको थिएँ, यस्तो सपना देख जुन कहिल्यै सपना नहोस् । यस्तो लडाई लडौं जसका लागि हामी फेरि लड्न नपरोस् । महिला दिवस मनाउँदै गर्दा म कहिले काँहि कहिल्यै पूरा नभएका मुक्तिका सपनामा टहलिन्छु । लडाई लड्दालड्दा फेरि उठ्नै नसक्ने गरी लडेको लडाईमा घोत्लिन्छु । बिद्रोहको मुठ्ठीमा कैद महिला हक, अधिकार र समानता कसले कसरी खोसेर पुनः कब्जामा लियो भनेर घोत्लिन्छु ।
२० वर्षअघि अन्तर्रास्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा मनमा अनेक भावना सल्बलाएका थिए । के साँच्चै म पनि उत्पीडनमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उनीहरुको नेतृत्व गर्न सक्छु ? मैले आफैंसँग यो प्रश्न गरेको थिएँ । संसारका उत्पीडित महिलाका लागि जसरि मार्च ८ निर्माण भयो त्यसलाई नेपालमा गति दिने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने लाग्यो । सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा विद्यमान विभेदको, असमानताको, अन्यायको, हिंसाको पर्खाल नेपाली महिलाले ढाल्नेछन् र त्यसको नेतृत्व जनयुद्धकारी महिलाले नै गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने लाग्थ्यो ।
त्यो त्यतिबेलाको सपना अहिले केलाउँदा रुमानी नै ठहर सही तर, हामीले लडेको लडाईको सबैखाले मोर्चाले लिएको लक्ष्य त्यही हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । हामी सगरमाथाको देश नेपालबाट यही सन्देश संसारमा दिन चाहन्छौ भनेर हामीले धेरैपटक त्यही भाषण गरेका हौं । मैले अग्रह योद्धाहरुबाट पनि त्यही सुनें । मैले सहयोद्धाहरुसँग पनि त्यही विचार र भावना आदानप्रदान गरें । हामीले मनाउने उत्सव वा विजय उत्पीडित महिलाका लागि पनि उत्सव बनोस् भन्ने पवित्र कामना हुन्थ्यो महिला दिवस मनाउँदै गर्दा ।
पूर्णकालीन भएपछि कमरेडहरुले दिएको पुस्तकले नै अध्ययनको बाटो भेटिन्थ्यो । अहिले रसुवा जिल्लाको नेकपाका नेता रहेका तिनै इन्द्र गौतम ऊ जमानाका हाम्रा जगतजंग हुन् जसले मलाई लेनीनको परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यसत्ताको उत्पत्ति नामको पुस्तक दिएर पूर्णकालीन मोर्चामा अझ दृढताका साथ, प्रणका साथ लाग्न उकासेका थिए । रामभक्त उप्रेती बाका छोरी थिइन् गायत्री उप्रेती अर्थात् कमरेड नमूना । हामी महिला विश्व, महिला आन्दोलन, महिला मुक्ति, बर्गीय मुक्ति भन्दै लामालामा कुरा गथ्र्यौं । त्यतिबेला मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा शान्तिको लागि महिला शसक्तीकरणका नारा हुन्थ्यो ।
विरोधको लागि तयार महिला भन्ने नारा हुन्थ्यो । त्यसपछि अफगानी महिलाका विषयमा लैंगिक समानताका विषयमा, महिलाका लागि सुरक्षित भविश्य निर्माणको विषयमा रहेर महिला दिवस मनाइयो । कहिले नारा लगाइयो, कहिले नारा लगाउन लगाइयो । सँगै यी नारा लगाउने समवयी सहयोद्धा नमूनालाई २०५९ सालमा सेनाले थान्सिंगबाट नियन्त्रणमा लियो र सेराको फाँटामा सामूहिक बलत्कार गरी हत्या गर्यो । म अहिले पनि सोच्छु महिला मुक्तिको बिगुल फुक्ने नमूनाहरु आजको समाजका लागि नमूना हुनपर्ने हुन्, मानिन पर्ने हुन् ।
यी दिवसहरु मनाउँदै गर्दा म हिजोका हाम्रा नेतृत्वहरुलाई आजको तराजुमा राखेर हेर्ने प्रयास गर्छु । हिजोका सिद्धान्त आदर्श र आजको जीवनशैली ब्यवहारमा नमिलेको सन्तुलन हेर्छु । के गर्छु भनेर हिजो लडे लडाए र आज के गरे ? हिजो राज्यसत्ताबाहेक सबै भ्रम हो भन्ने नेताहरुले आज सत्तामा बसेर मनाइरहेको तामस खुशी नयाँ बर्गउत्थानको नयाँ उदाहरणभन्दा केही पनि होइन भन्ने मेरो ठहर हो । निसन्देह हो नै रहेछ, उनीहरुलाई राज्य र सत्ता नै सर्वथोक रहेछ ।
योद्धा र जनता आज किन असन्तुष्ट छन् ? पार्टी कमिटी र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा नेताका छोराछोरी, आफन्त, आसेपासे, गुटमा रमाउने र आर्थिक सहयोग गर्नेले मात्रै अवसर पाइरहेका छन् । युद्धमा अभिभावक गुमाएका, घाइते र अपाङ्गका छोराछोरीलाई सानोभन्दा सानो अवसर पनि नदिने भएपछि हिजो शत्रु करार गरिएको सामन्तवाद, नोकरशाही वा दलाल पुँजीवादको अभ्यास स्वयं नेतृत्वले गर्ला वा त्यसकै संरक्षक बन्ला भनेर कसले सोचेको थियो र ?